Tsy ratsy ilay finiavana, ary mila tohanana ny fikarohana Malagasy, kanefa toa nisy fahadisoana paikady angamba tao. Toa maika loatra tany amin’ny serasera ivelany, ka nisy fenitra ara-tsiantifika sy ara-teknika toa voadingana raha ny adihevitra mandeha sy ny ahiahy. Nahoana ny IMRA izay voalaza fa tena tompon’ny CVO no tsy mbola tena vonona ny hamoaka ny singa rehetra hahafahana mahazo ny fahazoan-dàlana feno hamarotana azy eny amin’ny tsena na AMM? Tsy sanatria fanakianana be fahatany ity vokatra Malagasy ity, fa misy zavatra mety mbola tsy tena milamina hakana toky sy antoka tsara ao, toy ny fenitry ny tambavy. Azo atao tsara mantsy ny mamoaka ny anaran'ny akora nanaovana azy sy miaro izany eto Madagasikara sy iraisam-pirenena ary tsy tokony ho sakana amin’ny fanjakana ny resaka ara-bola, raha efa tena feno ny antoka. Tsy ny famokarana tambavy no olana, fa ilay fanarahana fenitra. Efa nandeha, ohatra, ny fampisotroana ny olona faobe vao nampahafantarana fa misy sokajin’olona tsy tokony hisotro. Tsisy fazavana na “notice” fa taty aoriana vao hoe hatao. Tena voafehy ve ny fampiasana azy? Efa nandefa hatrany ampitan-dranomasina anefa isika, ary misy aza ny vaovao sasany milaza fa efa hamidy 15 euros isaky ny tavoahangy izy ity any ampita. Andrasana anefa izay mety ho fanampim-panazavana na fandisoana avy amin’ny fanjakana.